MEGA inogadziridzwa ichiwedzera nyowani uye yakakosha nhau | IPhone nhau
MEGA inogadziridzwa ichiwedzera nyowani uye yakakosha nhau
Parizvino kana tikasiya vanosiiwa vanochengeta sevashandisi vakaita seApple, Google kana Microsoft, tinogona kuwana akasiyana masevhisi, ayo mune dzimwe nguva tipe isu yakawanda yakawanda yekuchengetedza kana ichienzaniswa neaya mahofori matatu. Iyo yekuchengetedza gore sevhisi iyo DotCom yakagadzira, MEGA, ndiyo imwe yeiyo inotipa isu yakanyanya nzvimbo, iine 50 GB yekuchengetera chero chatinoda mahara.
Mavhiki mashoma apfuura, runyerekupe rwakaparadzira izvo sevhisi inogona kuvharwa husiku nekuda kweshanduko muhutungamiriri hutungamiriri hwakafanana, uko DotCom sezviri pachena isingapende chero chinhu, kunyangwe yagadzira sevhisi. Imi mose muchayeuka MegaUpload, iyo yekuchengetedza sevhisi yakagadzirwa neDotCom uye iyo yakavharwa neFBI makore mashoma apfuura, yekuchengetedza zvemukati zvakachengetedzwa nekopiraiti.
Iko kunyorera kweIOS kwave kungovandudzwa kuwedzera nekugadzirisa mashandiro emabasa akasiyana siyana senge kuisa iwo mapikicha kubva kune kwedu reel, manejimendi ehumano hwekugovana zvirimo, chikamu chitsva chisina kubatika kunze kwekuwedzera mitauro mitsva seArabic, Bulgarian, Slovenian, Filipino, Serbian, Thai neUkraine.
Chii chitsva muMEGA vhezheni 3.2
Kamera inomuka. Huru kugadzikana kwekuvandudza.
Manejimendi ekubatanidza kune maforodha uye mafaera akagadziridzwa, pamwe neyakagadzirwa. Iye zvino unogona kuendesa / kurodha pasi zvinongedzo kumafolda kana zvimwe zvirimo. Zvakare vhura ma link pasina kiyi (Iwe unofanirwa kuisa iyo decryption kiyi kuti ugone kuona zvirimo)
Govera maforodha nekupinda email. Kana ivo vanogamuchira vasina account muMEGA, ivo vanogashira kukokwa kuti vagadzire iyo. Kana ivo vatove neakaundi, ivo vanofanirwa kugamuchira iyo yekukumbira chikumbiro uye yakagovaniswa dhairekita ichaonekwa mune "Yakagovaniswa" tab.
Inowanikwa kunze kwenyika. Unogona kusarudza akawanda mafaera ku: kugovera, chengetedza mifananidzo nemavhidhiyo kune Mapikicha (max 5), kuteedzera, kupurinda, kudzima, nezvimwe.
Yepamberi. Chikamu chitsva muZvirongwa. Ikoko iwe unogona kudzima mafaera anowanikwa kunze kwenyika, cache kana kudurura iyo Tsvina.
Madiki madudu akagadziriswa.
Shanduro dzakagadziridzwa. Wakawedzera shanduro kuArabic, Bulgarian, Slovenian, Filipino, Serbian, Thai neUkraine.
Uye zvakare, ivo vakomana vanobva kuMEGA vanotibvumidza joina chirongwa cheTestFlight yeiyo application yekuyedza dzese nhau pasati pasunungurwa yekupedzisira yeimwe neimwe yekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » MEGA inogadziridzwa ichiwedzera nyowani uye yakakosha nhau
Uyu unogona kuve wekutanga mufananidzo weiyo iPhone 7 kesi
Mifananidzo yeiyo iPhone 7 ine imwe dhizaini: ina masipika